Nwere ike ịnya ụgbọ ala na eriri USB mebiri emebi? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Nsogbu USB na-agbanwe - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Nsogbu USB na-agbanwe - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Nwere ike ịnya ụgbọ ala na eriri USB mebiri emebi?
You nwere ike ịnya ụgbọ ala na eriri USB mebiri emebi? Ọ bụrụ naUSBbuagbajikwa,gịAga m enwe ike ịkwaga yagbanyen'ọnọdụ ọ bụla, manannyefe ganọrọ n'otu ebegia. Nke a nwere ike ịhapụgịaraparawogia, ma ọ bụ ọbụna rapaara na ogige dabere na mgbeUSB mebiri.18.03.2020
Hey ụmụ okorobịa ChrisFix ebe a taa. Aga m egosi gị otu esi edozi ngbanwe nke gbanwere n'ime ngwa ziri ezi dịka ugbu a. Ha na-ekwu na ọ bụ ụzọ ọzọ na Eziokwu? Ọ na-anọpụ iche na nke ahụ na-adị ka ọ dị larịị n'ezie.
A na-egwu ya nke ukwuu, na-egwuri egwu ọtụtụ, Ma oge ụfọdụ mgbe ị tinyere ya n'ogige ahụ, ọ nọghị n'ogige ahụ, gbalịa ịmalite ụgbọ ala ọzọ, ọ gaghị ebido n'ihi na ọ nọghị n'ogige ahụ, ma gị ọbụnadị na enwere ike ịnọ n'ogige ahụ hụ ọtụtụ egwuregwu na-eme nke a bụ ụdị ụgbọ ala Ford ugbu a, m nọ na (1995) Ford Windstar na m ga-egosi gị ihe kpatara ya ọ bụ na ọ bụ ihe nkwụnye ego dị mfe. agaba n’ile anya n’uja anyi aghaghi iwere ihe ozo. Naanị chọta pedal breeki gị wee banye n'okpuru ebe a ugbu a. Nke a bụ ntụpọ breeki gị, ị soro ntụ ụkwụ breeki elu Ruo mgbe ị rutere n'ọdụ ụgbọ elu ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ ma m na-ebugharị ntụgharị ihu, nke na-akpali Ya mere, mgbe ahụ anyị chọrọ ile anya n'azụ ya na otu ụzọ elu n'akụkụ Ma ị nwere ike ịhụ kposara abụọ a dị n'aka nri, nke ọgba aghara ahụ kwụsịrị.
M metụrụ gia osisi ahụ ma ị hụ mkpali a ka ị nọ ebe kwesịrị ekwesị yana ihe na-eme kposara abụọ a na-apụ ma na-atọpụ ha, yabụ ọ bụrụ na m tinye aka m azụ ebe a na n'ụzọ ụfọdụ, jiggles a gburugburu, ị nwere ike ịhụ otu ha abụọ na-agbasasị ma ọ na-ahapụ ọtụtụ slack ebe a dị oke nfe na slack ka ebugara n'ime nke a nke na-aga gearbox gị ma gbanwee ngwa ngwa dị mfe idozi na anyị kwesịrị ịgbatị ihe ndị a ma m n'ezie na-aga ịkpọrọ ha ma tinye mkpuchi mkpuchi uhie na ha. Anyị na-eme otu n’otu na ndị ọzọ na mkpọchi mkpọchi na-ahụ na ha anaghị agbagha ọzọ. Ya mere, ka anyị lelee injin ahụ ebe a Ma lee anya na menyeji gia iji jide n'aka na ọ bụghị nke ọma na njedebe ahụ, ị ​​ga-ahụ gearbox ebe ahụ, enwerekwa lever gear, nke ahụ dịkwa mma ma sie ike, ọ bụghị ọtụtụ egwuregwu.
Anyị ga-esikwa na peeji a wee nyochaa peeji a. Ọzọkwa ọzọ adịghị ọtụtụ egwuregwu nke mere na ọ dị mma. Achọrọ m ịlele mgbe niile ma ọ bụrụ na ọ bụ, naanị ihe ị chọrọ bụ ụfọdụ threadlocker na ogo 30, yabụ ka anyị wepụ ya n'otu n'otu mgbe ahụ anyị ga-agbakwunye ntakịrị ntakịrị ihe a na-ewepu ya na nke a na-egbochi mkpọtụ ahụ ịtọpụ eriri elu.
Anyị na-eme ya otu otu oge nke mere na nke a bụ n'ezie akara iji jide n'aka na ọ dị mma ma sie ike don'tgaghị eme nzuzu na-eme ka nke a sie ike, mana ị chọrọ ịmịnye ya ma anyị ga-ewepụ nke ọzọ, Aga m eme otu ihe ahụ maka nke a. Naanị ntakịrị ihe na-adịgide adịgide na njedebe nke ebe a, laghachi ebe a ma mee ka ọ sie ike, wee mechaa jikọta ya na 30 torques Ọ dị mma, ugbu a, ka anyị nwalee ya wee hụ otu ọ dị ọfụma, ee, nke ahụ dị adị ugbu a, amaara m gia na-eche ma na-adị ire ụtọ enweghị nnukwu azụ azụ ma ọ pịa nri n'ime cog ma e jiri ya tụnyere tupu ebe m nwere ya? Amaghị m ụdị gia m nọ na ya ma ọ bụ ọgba aghara na ị nwere ike ịhụ na enweghị nnukwu ije ebe a, yabụ enwere olile anya na isiokwu a nyere aka. Ọ bụrụ n ’ị na-eche echiche inye mkpịsị aka ukwu, gbaa mbọ hụ na ị debanyere aha.
M na-ebipụta akwụkwọ nkuzi na kwa izu wee zaa ajụjụ na azịza ọ bụla ị hapụrụ na ngalaba nkọwa na ihuenyo ahụ. Ou nwere ike pịa ha na ihuenyo ma ọ bụ na ị nwere ike ịchọta njikọ nke isiokwu ndị a na nkọwa dị n'okpuru. Ọzọkwa na nkọwa dị n'okpuru ebe ị ga-ahụ njikọ na Chrisfix Facebook na Twitter Pages Ọ bụrụ na ị na-eji Facebook ma ọ bụ Twitter, lelee ya
Ego ole ka ọ na-eri iji dochie eriri USB?
Nankezi ọnụmaka akpaka transngbanwe eriri USBdị n'etiti $ 253 na $ 290. A na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ n'etiti $ 136 na $ 173 ebe akụkụ dị ọnụ ahịa na $ 117.03/15/2020
Taa, anyị ga-amụta otu esi agbanwe eriri ntụgharị. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ịme nke a. Mgbanwe eriri na-akaghị nká, kink na-akwụsị na-arụ ọrụ were were mgbe a mgbe.
Ihe mere m ji na-agbanwe nke m taa bụ obere mgbagwoju anya. Mgbe m nwetara igwe kwụ otu ebe a, a na-emegharị eriri USB gaa n'akụkụ aka ekpe nke etiti ahụ yana eriri ntụgharị gaa n'aka nri. Nke a mere ka eriri ndị ahụ na-ete na ọkpọkọ isi ma ọ naghị ele anya na ọ na-eme ka m pụọ nwoke! Tụkwasị uche gị n'ihe ndị dị ka nke a bụ naanị ihe na - egosi na ị hụrụ igwe kwụ otu ebe n'anya, yabụ taa m ga-etinye eriri ogologo karịa ka m wee nwee ike ịga ya n'ụzọ masịrị m, tụlee nkọwa ahụ, tụgharịa igwe kwụ otu ebe gị na nke mbụ dị ala na weta ihe gbọmgbọm gị niile n'ime.
Hapụ ihe nkedo na derailleur ma wepụ eriri ochie gị, ị ga-akụtu okpu a ma ọ bụ belata njedebe iji nweta ya. N'elu lever griọ ị chọrọ ịchọta ọdụ ụgbọ mmiri, nke na-eji okpu na-echekwa mgbe ụfọdụ. Eriri kwesịrị inwe nkwụsị igwe na njedebe.
Imirikiti n'ime gị ga-agbanwe eriri gị na ikpe gị, yabụ ọ ga-abụ ezigbo echiche ịnwe eriri eriri USB na aka. You nwere ike iji ọgwụgwụ ngwa mkpaji ihe ma ọ bụ dykes ma ndị a bụ a otutu mfe; can nwere ike iji ụlọ ochie gị dịka onye ndu, mana ọ bụrụ na ị na-agbanwe ihe ọzọ na igwe kwụ otu ebe, dị ka aka gị ma ọ bụ derailleur, ị nwere ike ịkpọọ nkụ ya iji mee ka ogologo oge kpebie. Nke a bụ ihe m na-eme. Ana m arapara ya na ntugharị, na-ehulata gbagọrọ agbagọ ma gbalịa ịhazigharị ogologo eriri igwe breeki iji mee ka ihe dị mma.
Mgbe m na-edobe eriri m na-echeta na ogologo oge dị mma karịa mkpụmkpụ nwere ike ịlaghachi azụ ma belata ya karịa. Ọ bụrụ na enwere m obi ụtọ na ogologo m nwere ike belata ikpe ahụ na naanị ikpe ahụ. Ebipụla eriri niile.
Ugbu a na anyị emeela ihe akpọnwụ-akpọnwụ, ọ bụ oge itinye waya n'ime leverhift lever. Nke a, kwa, chọrọ ụfọdụ ịpịgharị. Anya isi na ị gbanwere n'ime ala kachasị ala, ọ kwesịrị ịdọrọ kwụ ọtọ wee pụta n'akụkụ nke ọzọ a ga - esite na njedebe ndị a.
Kwesịrị ịdebe otu n'ime ihe ndị a na eriri mbụ, fanye eriri n'ime ikpe ahụ, wee tinye ihe niile ọnụ. Ọ bụrụ n ’ibute ikpe n’okwu ahụ na mbụ, ị gaghị enweta eriri n’ime ya. N’ebe a, eriri USB kwesịrị ịpụta site na nsọtụ nke ọzọ nke ụlọ ahụ, yabụ, ọ ga-erukwa na njedebe n’akụkụ a.
Ugbu a chọpụta ihe nkwado eriri USB gị ma mee ka eriri ahụ kwekọọ. Ọ bụrụ na ị tụọ ikpe gị n'ụzọ ziri ezi, enwere mgbatị dị mma, sara mbara na ebe ahụ. Sere eriri ahụ ka o kwere mee ma chekwaa mwekota ahụ.
Bee osisi ahụ, dozie derailleur gị, pịa otu njedebe na ya, ọ bụ ya. Ọ bụrụ na ị ka nwere otu onye derailleur, lelee nkọwa maka njikọ nke isiokwu m ọzọ. Ugbu a, ka anyị kwuo maka nkọwa.
ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè
Nke mbu, enwere uzo abuo isi. Nke a tọrọ atọ. Lọ dị ọnụ ala karịa nwere isi ihe siri ike.
Ọ bụrụ na ị bee a siri ike ikpe ya niile ga-ejedebe jagged, otú ị ga-mkpa ka ịgbatị ya na a grinder ma ọ bụ bee ya diagonally ọzọ ka ọ dị larịị, nke dị mkpa dị ka ọ pụrụ ịkpaghasị USB. Ọtụtụ ikpe na-abịa na obere plastic tube na ị ga-mkpa duba obere mbụ iji nweta USB site. Mgbe ụfọdụ, eriri na-anọ na nsọtụ nke ọzọ.
Ọ bụrụ otu a, ịchọrọ ịdọghachi ya ma pịa ya ọkpọ. Oge izizi ịtinye eriri na derailleur, ịkwesịrị ịkwado ya, mana ọ bụghị nke ọma. Nwere ike iweghachi ya mgbe obere oge gachara mgbe ịmalite ịmalite ịrụ ọrụ ma ị ga-ahụ na eriri nwere ọtụtụ slack.
N’ebe a ị chọrọ ikesii ya ike ọzọ. Ọtụtụ ndị na-arụzi ụgbọala nwere otu ụdị ndị a aka nke atọ.
Ihe a dị oke mma maka ịnwe ọgbaghara, mana ọ bụrụ na ịnweghị, enwere mbanye anataghị ikike. Jide eriri n'otu aka ma tinye mkpịsị aka gị na derailleur. Dịrị obere derailleur na casset wee mee ka mwepụta ahụ sie ike.
Mgbe ị hapụrụ ya, ụdọ kwesịrị ịdị na esemokwu. Ugbu a ị nwere ike ịgba okirikiri e ga-emekwu ntakịrị iji jide n'aka na ọ siri ike ma dịkwa mma-na-akụzi derailleurs gị. Ọ bụrụ n ’ị na-agbanwe eriri igwe gị, ikekwe, ị ga-achọ idozi esemokwu ahụ.
Jide n'aka na mgbe ị nọ na ntanetị kachasị, otu pịa na-akpali gị gia. Ọ bụrụ na ezughi oke, ịkwesịrị ime ka esemokwu gị bawanye site na ịtọpụ gbọmgbọm ahụ. Nọgide na-agbago na ịgbanwee mgbatị ahụ ruo mgbe ị ga - enweta ya na kaseti ahụ niile. Ọ bụrụ na ị ga - ewepụ gbọmgbọm ahụ ka onye nzuzu, weghachite ya ma dọọ eriri ahụ ngwa ngwa.
N'ime izu ole na ole, ọ ga-adị mkpa ka ị gbanwee eriri ahụ ka ihe ga-agbatị ma nọrọ ọdụ. Mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-esogbu ihe ndị a nile, ị ga-ejedebe eriri USB ahụ. Nke a abụchaghị ọnwụ ọnwụ.
Malite ebe eriri adịghị emebi, jiri mkpịsị aka gị gbanye. Ọrụ ala gị na USB ruo mgbe ị na-ahụ na nsọtụ; mgbe etinyere ihe niile, tinye otu n'ime okpu ndị a ma pịa ya na ngwa mkpaji ma ọ bụ c Ahụla m ụfọdụ ndị na-atụcha okpu ọnụ yana mkpirisi kwa. Mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ na gị giaarshift-arụ ọrụ ezi mbụ ole na ole Kwadobe, ma mgbe ahụ, ihe na-ama jijiji n'ihu na cassette.
M hapụrụ njikọ na nkọwa ahụ na-egosi gị otu esi emesi nsogbu a ike. N'ikpeazụ, dị njikere ịhapụ eriri sentimita ole na ole na njedebe. Maghị mgbe ị ga-arụ ọrụ na powertrain gị ma belata ụfọdụ eriri iji kpochapụ ya ọzọ.
Ọ bụ ya! Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwaọrụ ma ọ bụ ngwa ọ bụla, ị nwere ike ịchọta njikọ niile dị n'okpuru. Ọ bụrụ na ị lere edemede a anya ma ka na-ejighị n'aka maka otu esi gbanye eriri, emela ihere, ụlọ ahịa anaghị akwụ ụgwọ ọtụtụ maka swaps USB, ma n'ezie ha niile nwere njedebe ziri ezi na njikọta iji nweta ọrụ ahụ. nri. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ, gaa na nkwupụta ma nwee olile anya na m ma ọ bụ onye ga-aza gị.
Daalụ maka ịnyịnya soro m taa ma hụ gị oge ọzọ.
Gịnị na-eme ka eriri gia gbanye mgbari?
Kacha nkịtịihe kpataramaka ọdịda nke aịgbanwee eririna-amatị. Ọ na-adịkarị n'ụgbọ ala na nnyefe akwụkwọ ntuziaka n'ihi na ị na-ebugharị yagbanyeugboro ugboro; ị naghị etinye ya ma chefuo ya dịka ị na-eme yaakpaka nnyefe.
Ọ dị mma, yabụ ka anyị bido site ngbanwe anyị nke eriri na eriri ngbanwe anyị maka 1997 Saturn ụzọ anọ SL. Aghọtaghị m ihe kpatara ụfọdụ ndị na-arụzi ụgbọala ji azụ ahịa ahụ, mana ọ bụ, ọ bụ onye na-edozi ngwa ngwa ụgbọ ala ahụ, ọ nara waya fulaị, kedu nke bụ? ụfọdụ ụdị hanga waya o wee kechie ya gburugburu ebe a ma ọ kechie ya na nke a ma nke ahụ ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ mgbe ọ gaara emefu ego ole ọ bụ dollar anọ ma ọ bụ ise na ngwa enyemaka ahụ bouncer na-eme ma a na-akpọ ya omenala ịgbanwee eriri kit? maka SATA Saturn na o gunyere oghere na nkpuchi na-ejigide ebe a bụ oghere iji jide clip, ọ bụ n'ụzọ nkịtị nhazi oge 5 nke ụfọdụ ntuziaka ka anyị gafee ihe niile n'ụzọ ziri ezi, ọ na-ekwu wepu ihe njikwa dị na etiti yana gosipụta usoro mgba ọkụ nke ọma Emere m nke ahụ, egosighi m gị otu esi eme ya yabụ m ga-ebu ụzọ gosi gị nkenke etu esi eme ya mgbe a na-ejide akụkụ abụọ nke njikwa ahụ n'akụkụ ala site na Velcro fastener ka ọ pụta, yabụ ọ dị ezigbo mfe mana echela na ọ nweghị kposara ma ọ bụ kposara mana a ga-enwe ụfọdụ ọkụ ebe a ga-atọpụ ebe a n'ụzọ ziri ezi na iko njiri akụkụ ebe a ga-abụ ịghasa na ebe a ga-enwe nkedo echefula mgbe e mesịrị i sere nnọọ elu na ihe ị chọrọ ime bụ na ị chọrọ sere ya si n'azụ mbụ bụghị site n'ihu na ị dị nnọọ welie ya sere ya azụ, ọ na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu leme, ya mere anyị nwere ugbu a ihe niile nke a bụ ala nke ntụgharị mgbanwe, nke a bụ eriri ntụgharị ebe a , yabụ m ga-etinye halteron ọhụrụ ahụ ma ị nweta ohere mara mma nke ọma n'akụkụ ndị njem na ebe a, mana anyị ga-enweta ya debe ntuziaka ahụ ruo mgbe ngwụcha nke eriri ntụgharị bụ ebe oghere ahụ rapara bọl n'okpuru ntụgharị ihu na anyị ewepụlarị A na-atụ aro eriri USB nke bọọlụ bọọlụ site na ịtụ ya na ugogbe mkpọtụ mkpọtụ. Jide n'aka na ọ bụ, na ntuziaka nọmba atọ mara mma nke ukwuu na-agwa gị na ị gbadaghị dị ka nke a, naanị na ị na-anwale nke a site na akụkụ bọọlụ nke ntụgharị ntụgharị anọ site na-ebipụ roba ma ọ bụ wepụ oghere ochie ochie si eriri akụkụ ahụ na-apụ n'anya na njedebe nke eriri m na-eche na akụkụ roba ma ọ bụ oghere ochie yiri nke a, mana echere m na koodu nwere roba ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ Ahụtụbeghị ya tupu m nwee ike iche na ọ bụrụ na ha na-ezo aka na roba , ọ ga - ele ya anya ka emere Rubber, amaghị m ya, yabụ ọnụọgụ ise, oops, ọ bụ ụdị ikuku ikuku ka ọnụọgụ nke ise na - agwa anyị ka anyị dọba ọhụụ ọhụrụ na bọl bọọlụ, kpachara anya, akụkụ nwere nkọ ọnụ eyi uwe nchebe na-akwado ndị mmadụ nke ukwuu na ọ bụghị n'ezie na oseose m chere na ha na-eme nke a iji chekwaa ịnyịnya ibu ha maka ndị niile na-achọghị ịrụ ọrụ ma chọọ kl ihe kpatara ịgba akwụkwọ ụlọ ọrụ ka ị ghara inwe iyi uwe ma o buru na ichoro ihe instructi ons na-eyi uwe ma ọ bụ otu ahụ ka ọ siri pụta ma ọ na - ekwu snap ya na bọọlụ bọọlụ ka anyị ga - etinye akụkụ ahụ ozugbo na ala nke osisi gia mana tupu anyị agwụchaa, m ga - ehicha, m ga - ehicha a nka ọrụ ebe a site na nke a akwụkwọ clip ore fulawa waya hanga waya, ihe ọ bụla ọ bụ, na e mere a na-arụ ụgbọ, i nwere ike ikwere na ya enweghị m ike ikwere ya otú ahụ? Anyị nwere mpempe akwụkwọ ugbu a, anyị na-akwadebe itinye ya n'elu eriri mana ị hụrụ mgbanaka a ebe a ka anyị ga-amịpụta n'akụkụ ahụ n'ihi na ọ bụ ihe ikpeazụ ga-abanye wee jikọọ abụọ a ọnụ na mgbe ahụ anyị na-etinye ya Na-etinye mgbanaka ahụ n'ikpeazụ ma m ga-egosi gị otu esi eme ya, ọ nọ n'ime, yabụ ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime unu chere na nke a bụ ihe mgbu na ịnyịnya ibu nke na-etinye ya naanị maka ya ịkwanye, ana m eche na ị n'ihi na ọ na-esiri gị ike isoro onye ọkwọ ụgbọ ala rụọ ọrụ, yabụ ọ bụrụ na ịnwee milimita iri na obere oge ma ị chọghị ịba n'ime oche onye ọkwọ ụgbọ ala, nke ahụ nwere ike ịdị ka nkeji abụọ ọrụ, ma nke a bụ nke ikpeazụ na nke ikpeazụ na agbanyeghị Kwụpụ na mgbachi mkpọchi a na anyị ga-eme dịka ị nwere ike ịhụ na m ga-esere foto n'ihi na ọ dị ntakịrị ihe dị na ihuenyo m ka m wee mara ihe ị nwere ike ihu, ọ dị ka ọ dị mma ch bụ mgbanaka mana enwere mkpụmkpụ ma enwere aka dị ogologo, nke dị mkpụmkpụ ga-aga ebe ha mara ụlọikwuu yabụ buru mkpụmkpụ a nd anyị pịa ngwụcha anyị ga-eme nke ahụ mana m ga - ese foto ka ụmụ m mara ihe m na - ekwu maka ya ka m nwetara njikọ bọọlụ ma ugbu a, anyị ga - agbakwunye ya na ya nke ukwuu ihe ị chọrọ imere na ị ga-atụ osisi gị aka na ya a na m ewute ndị mmadụ, enweghị m obere njem ma ọ bụghị na m ga-ahapụ ya mana otu ọ bụla, echiche a si ebe a ma nke a bụ ihe ọ dị ka ọ dị ka ị tinyere nke a na ikpeazu, nke a bu otu uzo akwara, ya mere tinye ha na ogologo ogologo buru uzo ma gbaa mbọ hụ na mkpịsị aka niile nọdụ ala ndị ha kpọrọ arib, mana ee, ka m lee ma m nwere ike mbugharị na mgbanaka a nwere isi egbugbere ọnụ? na ọ ghaghị ịnọ n'okpuru mkpịsị aka ndị a niile ka ị na-eme na ọ ga-adị mma mana agbanyeghị Youtubers, nke a bụ 95 SpeedGTA enwere m olileanya na nke a nyeere aka ijide n'aka na ị nwale ihe niile tupu etinyeghachi ya niile ọnụ ekele maka ikiri
Gini ka ichoghari emeghari?
Na ntuziakannyefe,ohiajikọọ naịgbanwee eririnannyefe nnyefe. Dị ka akụkụ niile nkennyefe, hanwere ikena-agwụ ike ma na-agbaji oge.20.01.2021
Hey YouTube, kedu ka ọ si aga, ọ dị mma ịnwe ị laghachi n'ụlọ ụgbọala m. Taa, aga m etinye akụkụ ọzọ site na ACUITY Instruments na Honda Civic 2017 m. Dị mma ụmụ okorobịa, ya mere, ka anyị chee ya ihu, osisi ọhịa a na-etinye na ndị na-agbanye ọkụ mgbakọ na ọgbọ nke 10 nke ụmụ amaala anyị mara mma nke ukwuu.
Nke ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi na Honda chọrọ ka ụgbọ ala ndị a bụrụ nke onye ọ bụla na-azụ ahịa, ihe m na-ekwu bụ na ha anaghị atụ anya ka mmadụ zụta ụgbọ ala ndị a ozugbo, na-atụ anya na ha ga-akpa àgwà dị ka ụgbọ ala na-agba ọsọ ma ọ bụ mee ka oge na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị nke ụgbọ ala dị ka m na ị chọrọ iji nweta kacha arụmọrụ nke ụgbọ ala gị na nke ahụ pụtara na ị nwere ike tweak niile obere nuances na nkọwa otú ị na-enwe obi ụtọ na àgwà nke na-agba ịnyịnya. ACUITY jiri obiọma zitere m ntọala ndị a ka m hụ etu ha si atụnyere sistemụ ngwaahịa yana ọganiihu m nwere ike ịhụ.
Ya mere, tupu m kọwaa uru na ikwu okwu banyere atụmatụ nke akụkụ a ebe a, m ga-amalite site na ịtọpụ batrị iji gosi gị ụmụ nwoke nyocha nlele ka mma nke nzukọ igwegharị. Okay ụmụ okorobịa ka m wee wepụ batrị ahụ dum wee wepụ ya n'ụgbọala wee lelee ndị na-agbanwe eriri USB ebe a. Site na batrị ewepụrụ ị nwere ike ịhụ ebe nchekwa nke eriri eriri mgbanwe.
Ọ bụrụ na m gbanwere obere mgbatị ugbu a, ị nwere ike ịhụ nke ọma ihe m na-ekwu site na egwuregwu ị ga-enweta site na roba / soft bushings. Ọ dị mma, dịka ị pụrụ ịhụ n'isiokwu a, ọhịa na-enye ohere ka ọ bụrụ obere egwuregwu mgbe gearbox nọ na ya, ọkachasị mgbe m na-anwa ịmegharị ya ntakịrị site n'otu akụkụ gaa n'akụkụ na ntakịrị azụ na azụ. Yabụ ACHITY haziri ahịhịa ndị a iji belata mmeghari azụ ma melite ogo ngbanwe maka ọtụtụ ihe: Nke mbụ, ihe ha họọrọ siri ike, n'oge na-adịghị anya ọ gaghị abụ roba.
Theyzọ ha si hazie ụgbọ a dị ezigbo mkpa maka ọrụ nke onye na-ebugharị ụgbọ mmiri, tumadi n'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ asọmpi na-eji nsụgharị siri ike nke ya nke pụtara na ọ dị nso na nke a ebe a.
Agbanyeghị, ha chọpụtara na ha kwesiri iji bushing dị gburugburu, ebe oke ohia na-egbochi mmegharị nke eriri ngbanwe nke ukwuu nke na ọ na-eyiri eriri ahụ ma nwee ike ịgbaji eriri ahụ. Yabụ ọ dị oke mma n'ihi na ebugharị a na-ebelata egwuregwu naanị iji mepụta mmetụ dị nro na nke siri ike na-enweghị imetụta ngagharị zuru oke na arụmọrụ nke eriri ntụgharị. Mgbe emechara ihe a kọwara, ka anyị laghachi na nwụnye a ma gosi gị ka ntọala ndị a si banye na serial.
Ọ na-ewe oge iji wepu mkpachị ndị a. Achọpụtara m na obere skru screwdriver na-atọghe ihe nkwado ahụ n'ụzọ dị mfe iji wepu aka site na obere agịga - agịga-imi imi nwere ike iji wepu atụdo ahụ nwekwara ike iji aka wepụ ya.
Ewepụghị isi inupụ ochie roba bushings. Oghere ọhụrụ gbanyesiri ike na. Tinyeghachi ya na eriri dị iche.
Agbanyeghị, kpachara anya maka usoro ziri ezi nke bushing; ndị snap ring fasteners ga-enwere ndidi iji nwayọ rụọ ọrụ gị ma gwuo n'ime grooves na bushing iji jide ya na eriri ntụgharị. Wụnye ngwa ngwa ọhụrụ na bushings iji mee ka ha laghachi na ọnọdụ ha. Kpatụ ihe nkwado ahụ n'ọnọdụ ya.
Gbaa mbọ hụ na ha dabara na eriri. Ejiri m hama na 3/8 ndọtị weghaa ha n'ụzọ zuru oke. Lelee mbelata azụ azụ.
Ọdịmma dị ọcha dị ọcha: Yabụ ndị na-akwado ya, a na-achịkọta ntọala ndị ahụ zuru oke ka ị si ahụ na vidiyo a
A na-ebelata egwuri egwu. Yabụ enwere obere egwuregwu dị na clip a, mana ọ bụ naanị arụ ọrụ n'oge a. Ọ bụghị ihe anyị nwere ike ime n'ezie n'ihi na ọ dabere na nnabata n'ime gearbox yana njikọ ndị a niile.
Agbanyeghị, ka anyị gbakọtaghachi nke ahụ wee were nnwale nnwale. Anyị na-aga ịnwale ule n'otu ntabi anya ma enwere m enyi m Eli si IgnitionTube ebe a onye na-akwụsị maka nke abụọ ịse vlog taa
Igwefoto na-arụ ọrụ dịkwa mma. Na clip gara aga ị hụrụ na egwuregwu ahụ belatara n'ezie. Mmetụta mbụ m nwere na ihe ọ bụla azụ / arụnyere bụ na ihe niile na-eche ugbu a ọtụtụ ihe siri ike karị na mkpọtụ nke dị ebe ahụ mgbe m tinyere gia na gia na-ebelata ugbu a.
Enwere m ike ịnụ egwuregwu n'ihi na tupu i nwee ike ịnụ egwuregwu ahụ nke ọma, mana ugbu a ọ bụ ụdị aghụghọ dị oke. ee, na-eche n'ezie crisp ugbu a ọbụna smoother.
Ọ na-amasị m ka ọ dị, ọ masịrị m nke ahụ, ihe m na-achọpụta bụ na ihe ọ bụla na-eche na ọ dị ntakịrị karịa mgbe ọ dabara na ụzọ kwesịrị ekwesị yana mgbe ị gbanwere n'ụzọ, ọ dị mfe ugbu a dị nro. Eli - ọ gbanwere nke ọma na ụwa m na-atụ nrọ na dudePawinn - ọ dị ezigbo mma ugbu a, nnukwu ekele gị ọzọ ACUITY maka izipu ntọala ndị a. N'ikwu eziokwu, ntinye ahụ kwụ ọtọ.
Akụkụ kachasị sie ike nke nrụnye bụ na-ekpochapụ obere vidiyo ma ọ bụ eriri ahụ nke na-ejide ya na nkwado ahụ n'akụkụ gearbox. Ana m etinye foto nke ebe a n'ezie obere screwdriver nke pere mpe ị nwere ike ịchọta mana ọzọ karịa na akụkụ a dị mfe dị ka ịdọpụ ntọala ochie.
Tinye ha. Gbaa mbọ hụ na itinye obere vidiyo na-ejigide ha. Ihe niile yiri mgbaaka ha na-enye gị ma ọ bụghị ikuku.
Naanị inye gị nkwenye nke abụọ ebe a, m ga-ahapụ Eli ka ọkwọ ụgbọ ala ahụ iji hụ ihe ọ na-eche ma e jiri ya tụnyere akụrụngwa ọkọlọtọ. Yabụ kedu echiche mbụ gị. Eli - ọ naghịzi eme mkpọtụ ahụ mgbe ị na-eje ije, ị bụ eziokwu, ọ dịghị amasị ụzọ ọ ga-adị.
Nke a bụkwa nke mbụ m na-agba ịnyịnya ya na pedal spacer nke bụ ihe ochie gbasara gị. Na-amasị m osooso ọnọdụ ka mma ugbu a. Pawinn - Echere m na ebe ọ bụ na anyị bụ otu ịdị elu ọ ga-adaba n'ụzọ zuru oke.
Eli - Ka anyi nwaa ime ihe obere ikiri-ukwu. Oh, ụbọchị niile, dude, nke ahụ bụ mfe, kedu ihe ị ga-eme? gịnị kpatara na ọ dịghị ka ọrụ a.
anyịnya igwe kwụ otu ebe
Pawinn - Amaghị m. Eli - Ebumnuche ahụ bụ itinye nkwụnye ụkwụ na kilomita isii site na pedal brek. Honda rụrụ nnukwu ọrụ na ụgbọ mmiri na ụgbọ ala a na ACUITY na-eme ka ọ ka mma.
Honda arụghị nnukwu ọrụ na ntinye ụkwụ na ụgbọ ala a, ACUITY na-eme nke ahụ ka mma. Nke a dị mfe! Ihe hell m na-enweghị ike ikwenye na ha emeghị nke a maka ụgbọ ala ụlọ ọrụ na ị dị ka ọ gwaghị m ihe agbanweela, enwere m ike 100% kwenyere na ọ dị na ngwaahịa. , .. dị ka a ga - asị na ọ gaara eme n'ụzọ ahụ. ụgbọ ala a bụ ikuku ịkwọ ụgbọala.Pawinn - ọ bụ ihe na-atọ ụtọ karị ịkwọ ụgbọala ugbu a na ọ bụ naanị gbanwere na-ezighi ezi ebe ahụ? Eli - mba, adighi m nwayọ ma aka m gbapuo gia m na-agbanye n'ime ulo Pawinn ugbua, echere m na anyi na agaghari
Oh, gafee mkpọchi! Oh, ọ na-agba gburugburu! Na na na, whoaPawinn - niile mma, otú ahụ ka anyị nwetara Elis n'elu ebe
Ya mere ọzọ nnukwu ekele gị ACUITY maka zitere gị jacks ndị a. Enwere m mmasị na ha ma nwee obi ụtọ na ọ dị mfe ma dị mfe itinye akụkụ a n'ime ụgbọ ala, nke abụọ, ogo ụlọ na ọdịdị dị na nzukọ gia, na nke atọ, eziokwu ahụ bụ na ị tinyere nnukwu mgbalị n'ime imewe hụ na akụkụ a zuru oke na arụmọrụ nke arụmọrụ nke usoro ochie. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere nkọwa ma ọ bụ nzaghachi na ọdịnaya nke isiokwu a, biko hapụ ya na nkwupụta ndị dị n'okpuru ebe a ma enwere m ekele maka nkwado na nzaghachi gị.
N'ikwu ya, m ga-ahụ unu n'isiokwu ntinye ọzọ. Nwee ọmarịcha ụbọchị, nnaa!
Kedu mgbe a ga-eji dochie eriri ndị na-agbanwe agbanwe?
5000 ka 6000 kilomita bụ ezigbo oge etiti na-dochieiheGịnị. Ndị ọzọ maara ihe na-echere ruo mgbe ha gbajiri ma nwee ezigbo ụkwụ ụkwụ siri ike na ma ọ bụ dị mfe ntụgharị, dabere na agbajikwaUSB.Nwa 9 2010
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji dochie eriri USB?
Abụọ)Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji dochie eriri USB? Vehiclegbọ ala ọ bụla dị iche, n’ezie, mana oge ka ọ dịdochie eriri ntụgharịdị ihe dị ka otu awa na ọkara.
Ogologo oge ole ka eriri eriri na-adịgide?
Na na-ekwu, gịịgbanweeihe nhoputaUSBenweghị ndụ akọwapụtara akọwapụtara. Ọ na-adịgide dị kaogologoka ọ na-adịgide. Ọtụtụ mgbe, gịkwesịrịnweta ma ọ dịkarịa ala afọ ise na asatọ site na ya, mana ọdịda akaghi aka abụghị ihe a na-ahụkarị.01.15.2016
Nwere ike jigharị ụlọ nkwụnye ọkụ?
Can nwere ike iwerekwandị dịUSB/ụlọMA ndịUSBga-'eri' site nagbanyeka o megidebreekilevers ebeị nwere ikenaanị wepụ iheUSBsite na oghere na lever ma hapụ ihe niile n'ọnọdụ.06.05.2012
M Kwesịrị Dochie Shifter USB ?lọ?
Housinglọ obibiọtụtụchọrọ nnọchimgbe lubrication na linernweresaa ahụ ma ọ bụ mebie ya, ma ọ bụ bụrụ mmetọnweerụrụ ọrụ n'ime ha. Otu n'ime ndị a siri ike ịhụ, managaemetụta mmegharị nkeUSBn'imeụlọ. Nọvemba
Kedu mgbe ị kwesịrị iji dochie eriri eriri?
Gịnị bụ ihe ịrịba ama nke a ọjọọ shifter USB?
Ebe ọ bụ na nnyefe akwụkwọ ntuziaka nwere akụkụ ndị ọzọ na-agagharị, ọtụtụ nsogbu ndị edere na-eme n'ụdị nnyefe a. Nsogbu eriri USB na-emetụta nnyefe, njikọ na njigide. Ọtụtụ ihe ịrịba ama na mgbaàmà na-arụtụ aka na eriri ọkụ na-aga n'ihu. Oké gia menjuobi play bụ ezigbo ihe ịrịba ama na shifter USB na-aga ọjọọ.
Kedu ihe kpatara na ndị na-agbanwe m agbanwe anaghị abanye gia?
Hicgbọ ala agaghị abanye gia Mgbe ịmalitere ụgbọ ma gbalịa ịgbanwe ya n'ime gia, ọ bụrụ na onye nhọta gia agaghị agagharị mgbe ahụ enwere nsogbu na eriri nhọrọ mgbanwe gị. Eriri nwere ike gbajie ma ọ bụ setịa eriri. Nke a na-egbochi nnyefe site na ịnwe leverage dị mkpa iji gbanwee gia.
Igwe na-agbanwe agbanwe nke na-agbanwe agbanwe nwere ike ime ka ụgbọ ala daa?
Igwe na-agbanwe agbanwe siri ike nwere ike igbochi onye ọrụ ịgbanwee gaa na ngwa ngwa, tụgharịa, ma ọ bụ mee ka ọ jiri ike dị ukwuu iji gbanwee si gia gaa gia. Agbọ ala ga - akwụsị akwụsị ma ọ bụrụ na eriri ọkụ agbanwee. Ozugbo ịtọhapụ ipigide na a ntuziaka nnyefe, ụgbọ ala ahụ ga-awụlikwa elu na uloanumaanu ma ọ bụrụ na shifter USB etinyeghị esote gia.